Amakhasimende Azama Ukukufinyelela Kuma-Social Media, Ngabe Ukhona? | Martech Zone
Izicelo ezi-5 kwezingu-6 ezenziwe ngabathengi ezinkundleni zokuxhumana eziya ebhizinisini ungaphendulwa. Amabhizinisi ayaqhubeka nokwenza iphutha elibi lokusebenzisa imithombo yezokuxhumana njengomthombo wokusakaza kunokuba abone umthelela wawo njengezindlela zokuxhumana. Kudala, izinkampani zakuqonda ukubaluleka kokuphatha izingcingo ezingenayo ngoba ukwaneliseka kwamakhasimende kubangelwa ngqo ukugcinwa nokwenyuka kwenani lamakhasimende.
Umthamo we izicelo zokuxhumana nabantu zikhuphukile ngama-77% unyaka nonyaka. Kepha impendulo ibe ukwenyuka ngo-5% kuphela kwamabhizinisi. Leli yigebe elikhulu! Kungani izicelo zenhlalo zinganakwa ngendlela efanayo? Ukuqagela kwami ​​ukuthi abathengi abalindeli impendulo njengoba benza ngocingo ngakho-ke abacasuki njengoba benza uma behlala ocingweni olungaphendulwa. Kepha i ithuba lamabhizinisi ukwenza umthelela kwezenhlalo mkhulu kakhulu ezimbonini eziningi… ikakhulukazi ngokwazi ukuthi izimbangi zakho aziphenduli!
Ngonyaka odlule, kwavela ezinye izitayela ezimangazayo engxoxweni yezokuxhumana phakathi kwama-brand namakhasimende. Ibhizinisi Lomphakathi linikeza ukubuka konke okusheshayo kokuthambekela okuphelele nokuqondene nomkhakha.
The Ihlumela Inkomba Yezenhlalo umbiko ohlanganiswe futhi wakhishwa yi-Sprout Social. Yonke imininingwane ekhonjisiwe isuselwe kumaphrofayili omphakathi womphakathi angama-18,057 (9,106 Facebook; 8,951 Twitter) wama-akhawunti asebenza njalo phakathi kweQ1 2013 neQ2 2014. Imilayezo engaphezu kwezigidi eziyi-160 ethunyelwe ngaleso sikhathi yahlaziywa ngenhloso yalo mbiko.
Tags: ukulalela komphakathiizibalo zokulalela komphakathiizicelo zokuxhumana nabantuihlumela komphakathiihlumela inkomba yomphakathi
Kuyini ukumaketha okususelwa ku-Akhawunti B2B?